Muxuu la Baroortay Maxamuud Dirir Geetan? – Xeernews24
Muxuu la Baroortay Maxamuud Dirir Geetan?
18. Juli 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Maxamuud Dirir Geetan oo ah maanta ama haya xilka ergeyga gaarka ah ee rasayl wasaaraha dalka Itoobiya Dr;Abye Ahmed u qaabilsan xal uu raadinta khilaafka siyaasadeed ee dalka Suudaan ka taagan.
Mudane Maxamuud Dirir Geetaan ayaa oohinta afka kala waaxay mar uu ka hadlaayey heshiiska siyaasaddeed ee lagu soo af jaraayey xurgufta ka aloosan dalka Suudaan oo uu Maxamuud ka soo ciyaaray door wax ku ool ah.
Isagoo ka jeedsay hadaaloo koobaan oo u ku hadlaayey luqadaha Carabiga,Ingriiska iyo Amxaarka oo u amaan iyo kal gacayl ugu muujinaayey shacabka iyo dalka Suudaan ayuu Maxamuud Dirir ceshan kari waayey oohin laga wada daawaday war baahinta caalamka.
Maxamuud Dirir Geedan waa Siyaasi Soomaaliyeed oo 30-kii sanno ee la soo dhaafay ka muuqday siyaasad dalka Itoobiya heerar kala duwana ka soo qabtay dalkaasi Itoobiya.
Maxamuud Dirir Wuxuu ku dhashay magaalada leh taarrikhta faca wayn ee Diri-dhaba ee xarunta rasmiga ah ee gobolka Sitti.
10 Sanno ee u dambeeyey xaaladda guud ee magaaladi uu ku dhashay iyo guud ahaan Soomaali-State gaar ahaan gobolka Sitti siyaasadda iyo qaska ragaadiyey waa xaajo laga wada dheregsan yahay Maxamuudna in uu ka ooyo ha joogtee maalin qudha m soo dhex joogsan.
Sannadkii 2005-tii Magaalada Dan-lahelay wuxuu Maxamuud ka soo raray halkii ay deganayd oo la odhan jiray CANBULE isagoo shacabka reer Sitti u sheegey ama ku khiyaamay in goobtan ay tahay goob milatari oo dad shacab ah loo ogolaan karayn ila maanta ma jirto milatari la keenay goobtaas.
Dan-lahelay waxaa ka dhacay maanta waan wada ognay in dhamaan magaaladi sidda masaajidii,dhakhtarkii,madarasadihii quraanka,goobihi ganacsiga iyo guud ahaanba magaaladi la wada gubay oo ku dhawaad 40.000 shacabkii magaaladaas ay ila maanta bacad yaal yihiin waxaa gubayna ay yihiin maamulka Canfarta oo ka amar qaata dawlada Itoobiya ee maxumuud Dirir ka tirsan yahay.
Maxanuud Dirir haduu jacaylka shacabka iyo dalka Suudaan la ooyey ma wuxuu ku qosla oohinta iyo dhiigtay shacabka hooyadda iyo caruurta reer Sitti ee maalin walba macna daradda lagu daadin?
Sudan oo Waa Cusub U’baryay& Kaalinta Ambassador Mohumed Dirir.
Slået op af Rajada gobolka shiniile i Onsdag den 17. juli 2019
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/06/baroor.jpg 751 1075 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-07-18 11:34:302019-07-18 11:34:30Muxuu la Baroortay Maxamuud Dirir Geetan?
Taageerayaasha Trump oo ku boorinaya in uu Ilhaan Cumar Soomaaliya uu tarxi... Wax ka baro taariikhda shakhsiyaadka uu Farmaajo u magacaabay wada dadallada...